Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku dagaalamaya saxiixa Ryan Gravenberch | laacibfm.com
Home Laacib Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku dagaalamaya saxiixa Ryan Gravenberch
Real Madrid iyo Liverpool ayaa ku dagaalamaya saxiixa Ryan Gravenberch
Real Madrid iyo Liverpool ayaa lagu soo waramayaa inay yihiin kuwa ugu cadcad tartanka loogu jiro saxiixa khadka dhexe ee Ajax Ryan Gravenberch .
Inkasta oo uu wali lix bilood ka hadhsan tahay dhalashadiisa 20-aad, Gravenberch waxa uu mar horeba isu taagay inuu yahay nin muhiim u ah kooxda reer Holland, isagoo ka qayb qaatay 10 gool iyo 10 caawin 86 kulan oo uu saftay.
Si kastaba ha ahaatee, iyadoo ciyaaryahanka heerka caalami ee dalka Netherlands uu qandaraaskiisa ka harsan yahay kaliya 18 bilood, da’da yar ayaa si dabiici ah loola xiriirinayaa inuu u dhaqaaqo meel kale.
Sida laga soo xigtay Marca , Real Madrid ayaa diyaar u ah inay kula tartanto Liverpool dagaalka saxiixiisa.
Warar hore ayaa soo jeedinayay in Ajax ay diyaar u tahay inay aqbasho dalab 42 milyan ginni ah inta lagu guda jiro suuqa kala iibsiga xagaagan.
Kooxaha kale ee caanka ah, sida Manchester United, ayaa horey loola xiriirinayay Gravenberch.
Previous articleChelsea oo hogaanka u haysa tartanka loogu jiro Xidiga Lucas Digne
Next articleReece James oo mudo laba bilood ah ka maqnaan doona Garoomada Caalamka
Shaxda Rasmiga: Liverpool vs Porto ee Champions league-ga Guruub B, Liiska...
Kooxda Liverpool oo iska xaadirisay wareega 16-ka ee tartanka Champions League , ayaa garoonka Anfield ku soo dhawayn doontaa kooxda Porto kulan ka tirsan Group-ka B Arbacada. Kooxda Jurgen Klopp ayaa...
Manchester United oo dooneysa inay sare u qaaddo baadi goobka macalinka...